Nkọwapụta --lọ ọrụ - Qingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
Akpa House Camp / obibi
Akpa House maka Home / Holiday ụlọ
Akpa House Office
Nhazi usoro nhazi
Steel ụba multi storeies Building
Steel Structure Building maka Ụlọ ahịa
Steel Structure Building maka Office Education Building
Steel Structure Building maka Stadium
Steel Ọdịdị Onodi / nkwakọba
Steel Structure Building maka nkwakọba
Steel Structure Building maka Onodi / Osisi
Steel Structure okuko House
Ngwongwo Ngwongwo ígwè
Onodi Structure Onodi na Africa Egypt
Nigeria okuko House
Akpa Business Center
Ngwunye ígwè na mmepụta nke kọlụm
Echichi amalitela mbadamba igwe na ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị.
Ogige ụlọ ụlọ ọhụrụ prefab gwụchara na Hebei Hengshui
Artlọ Art na-acha odo odo | Igbe okpokoro - akpa wuo ogige Hotel
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd. bụ a kpam-ekesịpde enyemaka nke Qingyun Xinmao Metal Structure Co., Ltd. nke e hiwere na June 2003 na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ebe karịa 50,000 SMS. The ụlọ ọrụ nwere 486 ọrụ, 40 engineer, gụnyere 12 ndị na-emepụta, 25 ọkachamara engineering na oru pesonel.
The ụlọ ọrụ nwere zuru ezu ulo oru yinye maka engineering ize, plan emebe, mmepụta nhazi, ewu, oru ngo nnabata. The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji noo, n'ụlọ nkwakọba, ụgbọ, 4S ngosi Ụlọ Nzukọ Alaeze na na na. The ngwaahịa ígwè Ọdịdị ụlọ na akpa ụlọ na-ọma natara site anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa, ọ bụghị nanị na-ewu ewu ụlọ, na exported na Bangladesh, Indonesia, Israel, Nigeria, Sri Lanka, na Philippines, Mozambique na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Na akara na chọrọ nke ngwaahịa mma, ụlọ ọrụ ẹkenam elu mmepụta edoghi maka nọgidere ọhụrụ na ngwaahịa mmepe. Ugbu anyị nwere ihe karịrị 10 mmepụta edoghi, dị ka CNC ire ọkụ ịcha mmepụta akara, C-ngalaba ígwè mmepụta akara, H-ngalaba doo otu, ụzọ submerged aak ịgbado ọkụ mmepụta akara, Sanwichi efere mmepụta akara, nēbu efere mmepụta akara wdg
anyị esoro na professionalization nke ngwaahịa, large- ọnụ ọgụgụ mmepụta na iwebata ọhụrụ teknụzụ. "The quality nke oru ngo mma, echiche ma lezie ahịa ọrụ" ga-abụ ihe mgbaru ọsọ anyị. Anyị na-atụ na-ewu a mma n'ọdịnihu na ahịa.
Okwu: ime ụlọ 201, 32 # Building, Tian'an Cyber ​​Park, Chengyang district, Qingdao, China.